လယ်တွေ ယာတွေ ဈေးေ ကာင်း ရ တိုင်း မရောင်း ပါ နဲ့ လို့ ပြောနေ ရတာ ဒါေ တွ ကြောင့်ပါ…(ဖြစ် ရပ် မှန်) - Mega Wave
လယ်တွေ ယာတွေ ဈေးေ ကာင်း ရ တိုင်း မရောင်း ပါ နဲ့ လို့ ပြောနေ ရတာ ဒါေ တွ ကြောင့်ပါ…
(ဖြစ် ရပ် မှန်)
ထိုင်း နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ပိုင်း မှာ ချန်ထပူရီ ဆိုတဲ့ပြည် န ယ်လေးတ ခုရှိတယ်။ အဲ့ဒီပြည် နယ်က စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကလု ပ်ကိုင်ကြပြီး အများဆုံးစိုက်တာ ကတော့ စပါးပေါ့။
သူစိုက်တဲ့စ ပါးက ထိုင်းနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံးစာနီးပါး ဖူလုံစေသတဲ့။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စပါး အထွက် နှုန်းေ တွလျော့ ကျလာပီး နောက်ဆုံး လုံးဝ မထွက်နိုင်တော့ တဲ့အထိ ဖြစ်သွားခဲ့လို့ တရွာလုံးက ယောက်ျားလေးတွေ သင်္ဘောလိုက်
မြို့တက်အ လုပ်လုပ်၊ မိန်းကလေးတွေ ကျတော့လည်း ကာရာအိုေ ကဆိုင်တွေရောက် မကောင်းတာတွေ လုပ်စား စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ…။
ဒီ လိုနဲ့ နိုင်ငံ့အတွက် ဆန်စ ပါးရိက္ခာဟာ အစပိုင်းမှာ ဖူလုံနေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းကျ နိုင်ငံခြားက ဆန်စပါးတွေကို တင်သွင်းလာရတော့ ဝန်ကြီးတွေက သိပ်မကြည်ကြတော့ဘူး။
နောက်ပိုင်း လုံးလုံးလျားလျား တင်သွင်းလာရတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရိက္ခာငွေတွေ ထိခိုက်လာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဝန်ကြီးတွေဟာ အစည်းေ ဝးခေါ်ပီး အစီအစဉ်တခုကို ဆွဲခဲ့ကြတယ်။
ထိုင်းပြည်သူတွေက ဘုရင်ကို အရမ်းချစ်ကြေ တာ့ ဘုရင်ကို ခေါ်ပြီး (ဘန်းပြပြီး) အဝေးရောက်ေ နသူတွေကို စုစည်းရအောင် အဲ့ဒီချန်ထပူ ရီဒေသကို တိုင်းခန်းလှည့်လည်မယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တယ်။
ဘုရင်ကလည်း နိုင်ငံ့အေ ရးဆိုတော့ သဘောတူတယ်။ နောက် ဘုရင်က ဝန်ကြီးနောက်လို က်တွေနဲ့အတူ ချန်ထပူရီကို ရောက်တယ် ဆိုပါတော့။
အဲ့ဒီမှာ လူလည်းစုံရော အရင်က စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ အတိုင်း အပြောအဟောေ ကာင်းတဲ့ ဘုရင့်ကိုယ်ရေးအရာရှိကို ပြောခိုင်းေ တာ့တာဘဲ။
“ကဲ…ဘုရင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင် ဒီလို တိုင်းခန်းကြွလာရြ ခင်းဟာတော့ နိုင်ငံ့ရဲ့ အရေးပေါ်အြေ ခအနေတခုကို ကြေငြာအသိပေးလို တာကြောင့်ဘဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီဒေသရဲ့ စပါးအထွက်နှုန်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အရင်က
လူကြီးမင်း တို့ စပါးစိုက်ပြီး ထိုင်းတနိုင်လုံး ကို ဖူလုံနိုင်စေခဲ့တယ်။ အခု လူကြီးမင်းတို့ မစိုက်တော့လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ တခြားက တင်သွင်းေ နရတယ်၊ ဘဏ္ဍာရိက္ခာအရံငွေတွေ အလွန်ကို ထိခိုက်လာေ နတယ်။
အဲ့တော့ နိုင်ငံ့ရဲ့ ကျေးဇူးသစ္စာကိုစောင့်သိတဲ့အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ စပါးကို မဖြစ်မနေပြန်စိုက်ပေးကြဖို့ပါ။ မစိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီဒေသ အတွက် ထိုက်လျောက်တဲ့ အရေးယူမှုေ တွ ပြုသင့်ရင် ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်….”
အဲ့ဒီမှာ ဘုရင်ကြွလာလို့ အားလုံးပျော်ရွ င်နေရာကနေ ငြိမ်ပြီး ဝမ်းနည်း သွားကြတယ်။ ချက်ခြင်းဘဲ အဖိုးအိုကြီး တယောက်က ထလာပြီး တောင်သူဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဘုပြောနဲ့ ပြောချတော့ တာပေ့ါ။
“အေး…မင်းတို့ပြောသလို မလုပ်နိုင်ဘူး…. သတ်ချင်သတ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးတော့ မလုပ်နဲ့။ ငါ့တယောက်ထဲ လာသတ်လှည့်။
မင်းတို့က ငါ့တို့အကြောင်းတော့ သေသေချာချာ မစုံစမ်းဘဲ ရမ်းသမ်းပြီး လာလုပ်လို့ရမလား… ငါတို့ ဘယ်ေ လာက်ဒုက္ခရောက်နေ ခဲ့ရသလဲ မင်းတို့မသိဘဲနဲ့” ဆိုပြီး ဝင် ဖြဲတာပေါ့။
အဲ့တော့မှ ဝန်ကြီးတွေ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာကြတယ်။ ဘုရင့် ကိုယ်ရေးအရာရှိက ဝန်ကြီးတွေကို လက်တားပြလိုက်ပြီး… “ဒါဆိုရင် အဖိုး ဒီကစောင့်နေပါ။ ဒီကိစ္စကို အခုမရှင်းသေးဘူး မနက်ဖြန်ကျမှ ကျုပ်နဲ့ ခင်ဗျား ၂ ယောက်ချင်း တွေ့မယ်ဆိုပြီး” အားလုံး ပြန်သွားကြတယ်။
အားလုံးကတော့ ဘုရင့်အေ ရှမှာမို့(ဘုရင်က ပြည်သူတွေကို အရမ်းချစ်တာကိုး) အပြစ်မပေးဘဲ နောက်မှ အပြစ်ပေးမယ်ပေါ့ စသဖြင့် ထင်ကြတယ်။
ဘုရင့်ကိုယ်ေ ရးအရာရှိက သူ့ရဲ့ ရာထူးကိုစွ န့်လိုက်တယ်။ အားလုံးလည်း အံ့သြကုန်ကြတာပေါ့။
သူက ဝန်ကြီးတွေကို ပြောခဲ့သေးတယ်။ ကျနော်ဒီရွာကို သွားလေ့ လာရမယ်ပေါ့။ စုဝေးပွဲမှာ တုန်းက အဖိုးကြီးပြောတဲ့အထဲ တခုပါခဲ့သေးတယ်။
“ခင်ဗျားတို့က ရာထူးအဆော င်အယောင်တွေနဲ့ ကြီးပွားနေပြီး အေးအေးဆေးေ ဆးနေနေရတော့ ဒို့ဒုက္ခတွေကို ဘယ်သိမလဲ” ဆိုပြီးပေါ့။
ဒါကို ကိုယ်ရေးအရာရှိက ကောင်းကောင်း နားလည်သွားပုံရပါတယ်။ ဘုရင်ထံ ခွင့်တောင်းတယ်။ ရိုးရိုး အရပ်သားဘဝနဲ့ ချန်ထပူရီကို ကယ်တင်ပါရစေ ဆိုတော့ ဘုရင်ကလဲ ခွင့်ပြုတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ချန်ထပူရီ ကိုရောက် အဖိုးကြီးနဲ့တွေ့။ အကြောင်းအရင်းကို မေးကြည့်တဲ့အခါ…. “အရင်ကတော့ ဟုတ်တယ် စပါးတွေ စိုက်တိုင်းဖြစ်တယ်။ နောက် နိုင်ငံတိုးတက် လာတော့ ဓာတ်မြေသြဇာ ပိုးသတ်ဆေး… စတာတွေ ပေါ်လာတယ်။
အဲ့ဒါတွေသုံးရင် ၂ဆ ၃ဆ အထွက်တိုးမယ် ဆိုပြီး ဓာတ်မြေသြဇာ company ကြီးတွေက လာရောင်းတယ်။ အစပိုင်း ၄၊ ၅နှစ်မှာ သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း ထွက်တော့ တောင်သူတွေလဲ ဝမ်းသာတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း အထွက်နှုန်းလျော့ကျလာတယ်။
အထွက်နှုန်းလျော့ လာတော့ ဓာတ်မြေဩဇာကျွေးနှုန်းကို ၂ ဆ ၃ ဆ တိုးထဲ့ရမယ် ဆိုပီး Company တွေဘက်က ဆော်ဩလာတယ်။
နောက် ထပ်ပီး ဖော်မြူလာ ဝမ်း ဘာညာဆိုပြီး ဈေးနှုန်းမြင့်တဲ့ ဓတ်မြေသြ ဇာတွေ သွင်းတော့တာပဲ။ တဖြည်းဖြည်း တောင်သူတွေက မဝယ်နိုင်တော့ သူတို့က စပါးပေးနဲ့ရော င်းတယ်။
အစပိုင်း အဆင်ပြေပေမယ့် နောက်ပိုင်း အထွက်နှုန်းလျော့ လာပြန်ရော။ နောက်ဆုံး အကြွေးပေါ်အကြွေးဆင့်နဲ့ လုံးဝမစိုက်နိုင်တော့ဘဲ သားသမီးတွေကို ခုနကလို အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်အောင် တွန်းပို့သွားတော့တာဘဲ” တဲ့။
အဲ့ဒီမှာ စိုက်ပျိုးရေးေ ကျာင်းဆင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ေ ရးအရာရှိက (ရာထူးကစွန့်လိုက်ပြီနော်) သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ငွေတွေနဲ့ ပြန်စမယ်လို့ ဆိုလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့က လူစိုက်ပေး။
တချို့တဝက်တော့ လက်ရှိ အလုပ်ပဲ ဆက်လုပ်အုံးပေါ့။ နောက်အဆင်ပြေလာတော့မှ ဒီထက် လူအင်အား ထပ်တိုးကြတာပေါ့ဆိုပီး…. ကဲ မှန်းစမ်း မြေကိုစမ်းကြည့်မယ် ပေါက်တူးယူခဲ့ ဆိုတော့… ရွာသားတွေလည်း တက်ကြွလာတာပေါ့။
နောက် မြေကို ပေါက်တူးနဲ့ ပေါက်လိုက်တာ တချွမ်းချွမ်း မြည်နေတော့တာပဲ။ (ဓာတ်မြေသြဇာ တန်ခိုးတွေပြပီး မြေတွေ ကျွတ်ကုန်တော့တာပါ)
ဒါဆိုသိပြီ ဆိုပြီး အဲ့ဒိအချိန်ကနေ စတင်လာခဲ့ လိုက်တာ… အခုဆိုရင် ချန်ထပူရီမှာ စပါးအပြင် အခြားနှစ်ရှည်ပင်တွေရော၊ စားပင်သီး ပင်တွေရော စုံလို့။ ဒါ့အပြင် အဲ့ဒိဒေသက တောင်သူလယ်သ မားတွေအတွက် စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းကျော င်းကြီးလည်း ဖွင့်ပေးထားတယ်။
နောက် အပင်တွေကထွက်တဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ လူ့အသုံးအဆော င်တွေ စားသောက်ကုန်တွေ စတာတွေကို စက်ရုံတွေနဲ့ ထုတ်နေပြီလေ…. သင်တန်းကျောင်း ဆရာကတော့ ကိုယ်ရေးအရာရှိကြီးပေါ့။
(နမူနာ တခုပြောရရင် အဲ့ဒိဒေသက ပျက်စီးသွား တဲ့မြေတွေကို မြေဆီပြန်လုပ်တာနဲ့ပ တ်သတ်လို့ ချန်ထပူရီမှာ မြက်ရှည်ရိုင်းတွေက မပေါက်တော့
ကမ္ဘောဒီယားနဲ့ ဗီယက်နမ်တွေဆီက ဝယ်ပီး သင်္ဘောတွေနဲ့ ကားတွေနဲ့သယ်။ နောက်မှ အဲ့ဒါတွေကို နုတ်နုတ်စင်း မြေကြီးပေါ်မှာ ခင်းပြီး သဘာဝမြေဆီ ပြန်လုပ်ခဲ့ရတယ်)
ဒီ ဖြစ်ရပ်လေးကို နမူနာယူပြီး ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍကိုလည်း တိုးတက်အောင် တခေတ်ဆန်း ပြောင်းလဲ သင့်ပြီလို့ ထင်မြင်မိပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
(မူရင်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေခဲ့ဖူးတဲ့ စာရေးဆ ရာမကြီးတယောက် ဟောပြောပွဲကနေ စာသားအဖြစ် နားလည်နိုင်စေရန် ပြန်လည် edit လုပ်ထားရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့ တဲ့ အဖြစ်ကနေ ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာကိုထိုးဖောက်နေတဲ့ စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်ကို မီးမှောင်းထိုးပြချင် ရုံမျှသာ….)
လယျတှေ ယာတှေ ဈေးေ ကာငျး ရ တိုငျး မရောငျး ပါ နဲ့လို့ ပွောနေ ရတာ ဒါေ တှ ကွောငျ့ပါ…(ဖွဈ ရပျ မှနျ)
ထိုငျး နိုငျငံရဲ့ အရှပေို့ငျး မှာ ခနျြထပူရီ ဆိုတဲ့ပွညျ န ယျလေးတ ခုရှိတယျ။ အဲ့ဒီပွညျ နယျက စိုကျပြိုးရေးကိုသာ အဓိကလု ပျကိုငျကွပွီး အမြားဆုံးစိုကျတာ ကတော့ စပါးပေါ့။
သူစိုကျတဲ့စ ပါးက ထိုငျးနိုငျငံ တနိုငျငံလုံးစာနီးပါး ဖူလုံစသေတဲ့။ နောကျတော့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ စပါး အထှကျ နှုနျးေ တှလြော့ ကလြာပီး နောကျဆုံး လုံးဝ မထှကျနိုငျတော့ တဲ့အထိ ဖွဈသှားခဲ့လို့ တရှာလုံးက ယောကျြားလေးတှေ သင်ျဘောလိုကျ
မွို့တကျအ လုပျလုပျ၊ မိနျးကလေးတှေ ကတြော့လညျး ကာရာအိုေ ကဆိုငျတှရေောကျ မကောငျးတာတှေ လုပျစား စသဖွငျ့ပေါ့ဗြာ…။
ဒီ လိုနဲ့ နိုငျငံ့အတှကျ ဆနျစ ပါးရိက်ခာဟာ အစပိုငျးမှာ ဖူလုံနခေဲ့ပွီး နောကျပိုငျးကြ နိုငျငံခွားက ဆနျစပါးတှကေို တငျသှငျးလာရတော့ ဝနျကွီးတှကေ သိပျမကွညျကွတော့ဘူး။
နောကျပိုငျး လုံးလုံးလြားလြား တငျသှငျးလာရတော့ တိုငျးပွညျရဲ့ ဘဏ်ဍာရိက်ခာငှတှေေ ထိခိုကျလာတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဝနျကွီးတှဟော အစညျးေ ဝးချေါပီး အစီအစဉျတခုကို ဆှဲခဲ့ကွတယျ။
ထိုငျးပွညျသူတှကေ ဘုရငျကို အရမျးခဈြကွေ တာ့ ဘုရငျကို ချေါပွီး (ဘနျးပွပွီး) အဝေးရောကျေ နသူတှကေို စုစညျးရအောငျ အဲ့ဒီခနျြထပူ ရီဒသေကို တိုငျးခနျးလှညျ့လညျမယျလို့ ကွငွောလိုကျတယျ။
ဘုရငျကလညျး နိုငျငံ့အေ ရးဆိုတော့ သဘောတူတယျ။ နောကျ ဘုရငျက ဝနျကွီးနောကျလို ကျတှနေဲ့အတူ ခနျြထပူရီကို ရောကျတယျ ဆိုပါတော့။
အဲ့ဒီမှာ လူလညျးစုံရော အရငျက စီစဉျထားခဲ့တဲ့ အတိုငျး အပွောအဟောေ ကာငျးတဲ့ ဘုရငျ့ကိုယျရေးအရာရှိကို ပွောခိုငျးေ တာ့တာဘဲ။
“ကဲ…ဘုရငျမငျးမွတျကိုယျတိုငျ ဒီလို တိုငျးခနျးကွှလာရွ ခငျးဟာတော့ နိုငျငံ့ရဲ့ အရေးပျေါအွေ ခအနတေခုကို ကွငွောအသိပေးလို တာကွောငျ့ဘဲ ဖွဈတယျ။ ဒီနရောမှာ ဒီဒသေရဲ့ စပါးအထှကျနှုနျးနဲ့ ပတျသတျလို့ အရငျက
လူကွီးမငျး တို့ စပါးစိုကျပွီး ထိုငျးတနိုငျလုံး ကို ဖူလုံနိုငျစခေဲ့တယျ။ အခု လူကွီးမငျးတို့ မစိုကျတော့လို့ ကြှနျတျောတို့တှေ တခွားက တငျသှငျးေ နရတယျ၊ ဘဏ်ဍာရိက်ခာအရံငှတှေေ အလှနျကို ထိခိုကျလာေ နတယျ။
အဲ့တော့ နိုငျငံ့ရဲ့ ကြေးဇူးသစ်စာကိုစောငျ့သိတဲ့အနနေဲ့ ခငျဗြားတို့ စပါးကို မဖွဈမနပွေနျစိုကျပေးကွဖို့ပါ။ မစိုကျနိုငျခဲ့ဘူးဆိုရငျတော့ ဒီဒသေ အတှကျ ထိုကျလြောကျတဲ့ အရေးယူမှုေ တှ ပွုသငျ့ရငျ ပွုလုပျရပါလိမျ့မယျ….”
အဲ့ဒီမှာ ဘုရငျကွှလာလို့ အားလုံးပြျောရှ ငျနရောကနေ ငွိမျပွီး ဝမျးနညျး သှားကွတယျ။ ခကျြခွငျးဘဲ အဖိုးအိုကွီး တယောကျက ထလာပွီး တောငျသူဆိုတော့ သိတဲ့အတိုငျး ဘုပွောနဲ့ ပွောခတြော့ တာပေ့ါ။
“အေး…မငျးတို့ပွောသလို မလုပျနိုငျဘူး…. သတျခငျြသတျ။ ဒါပမေယျ့ အားလုံးတော့ မလုပျနဲ့။ ငါ့တယောကျထဲ လာသတျလှညျ့။
မငျးတို့က ငါ့တို့အကွောငျးတော့ သသေခြောခြာ မစုံစမျးဘဲ ရမျးသမျးပွီး လာလုပျလို့ရမလား… ငါတို့ ဘယျေ လာကျဒုက်ခရောကျနေ ခဲ့ရသလဲ မငျးတို့မသိဘဲနဲ့” ဆိုပွီး ဝငျ ဖွဲတာပေါ့။
အဲ့တော့မှ ဝနျကွီးတှေ လှုပျလှုပျရှရှဖွဈလာကွတယျ။ ဘုရငျ့ ကိုယျရေးအရာရှိက ဝနျကွီးတှကေို လကျတားပွလိုကျပွီး… “ဒါဆိုရငျ အဖိုး ဒီကစောငျ့နပေါ။ ဒီကိစ်စကို အခုမရှငျးသေးဘူး မနကျဖွနျကမြှ ကြုပျနဲ့ ခငျဗြား ၂ ယောကျခငျြး တှမေ့ယျဆိုပွီး” အားလုံး ပွနျသှားကွတယျ။
အားလုံးကတော့ ဘုရငျ့အေ ရှမှာမို့(ဘုရငျက ပွညျသူတှကေို အရမျးခဈြတာကိုး) အပွဈမပေးဘဲ နောကျမှ အပွဈပေးမယျပေါ့ စသဖွငျ့ ထငျကွတယျ။
ဘုရငျ့ကိုယျေ ရးအရာရှိက သူ့ရဲ့ ရာထူးကိုစှ နျ့လိုကျတယျ။ အားလုံးလညျး အံ့သွကုနျကွတာပေါ့။
သူက ဝနျကွီးတှကေို ပွောခဲ့သေးတယျ။ ကနြျောဒီရှာကို သှားလေ့ လာရမယျပေါ့။ စုဝေးပှဲမှာ တုနျးက အဖိုးကွီးပွောတဲ့အထဲ တခုပါခဲ့သေးတယျ။
“ခငျဗြားတို့က ရာထူးအဆော ငျအယောငျတှနေဲ့ ကွီးပှားနပွေီး အေးအေးဆေးေ ဆးနနေရေတော့ ဒို့ဒုက်ခတှကေို ဘယျသိမလဲ” ဆိုပွီးပေါ့။
ဒါကို ကိုယျရေးအရာရှိက ကောငျးကောငျး နားလညျသှားပုံရပါတယျ။ ဘုရငျထံ ခှငျ့တောငျးတယျ။ ရိုးရိုး အရပျသားဘဝနဲ့ ခနျြထပူရီကို ကယျတငျပါရစေ ဆိုတော့ ဘုရငျကလဲ ခှငျ့ပွုတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ခနျြထပူရီ ကိုရောကျ အဖိုးကွီးနဲ့တှေ့။ အကွောငျးအရငျးကို မေးကွညျ့တဲ့အခါ…. “အရငျကတော့ ဟုတျတယျ စပါးတှေ စိုကျတိုငျးဖွဈတယျ။ နောကျ နိုငျငံတိုးတကျ လာတော့ ဓာတျမွသွေဇာ ပိုးသတျဆေး… စတာတှေ ပျေါလာတယျ။
အဲ့ဒါတှသေုံးရငျ ၂ဆ ၃ဆ အထှကျတိုးမယျ ဆိုပွီး ဓာတျမွသွေဇာ company ကွီးတှကေ လာရောငျးတယျ။ အစပိုငျး ၄၊ ၅နှဈမှာ သူတို့ပွောတဲ့အတိုငျး ထှကျတော့ တောငျသူတှလေဲ ဝမျးသာတာပေါ့။ နောကျပိုငျး အထှကျနှုနျးလြော့ကလြာတယျ။
အထှကျနှုနျးလြော့ လာတော့ ဓာတျမွဩေဇာကြှေးနှုနျးကို ၂ ဆ ၃ ဆ တိုးထဲ့ရမယျ ဆိုပီး Company တှဘေကျက ဆျောဩလာတယျ။
နောကျ ထပျပီး ဖျောမွူလာ ဝမျး ဘာညာဆိုပွီး ဈေးနှုနျးမွငျ့တဲ့ ဓတျမွသွေ ဇာတှေ သှငျးတော့တာပဲ။ တဖွညျးဖွညျး တောငျသူတှကေ မဝယျနိုငျတော့ သူတို့က စပါးပေးနဲ့ရော ငျးတယျ။
အစပိုငျး အဆငျပွပေမေယျ့ နောကျပိုငျး အထှကျနှုနျးလြော့ လာပွနျရော။ နောကျဆုံး အကွှေးပျေါအကွှေးဆငျ့နဲ့ လုံးဝမစိုကျနိုငျတော့ဘဲ သားသမီးတှကေို ခုနကလို အဖွဈမြိုးတှဖွေဈအောငျ တှနျးပို့သှားတော့တာဘဲ” တဲ့။
အဲ့ဒီမှာ စိုကျပြိုးရေးေ ကြာငျးဆငျးဖွဈခဲ့တဲ့ ကိုယျေ ရးအရာရှိက (ရာထူးကစှနျ့လိုကျပွီနျော) သူ့ပိုငျဆိုငျတဲ့ ငှတှေနေဲ့ ပွနျစမယျလို့ ဆိုလိုကျတယျ။ ခငျဗြားတို့က လူစိုကျပေး။
တခြို့တဝကျတော့ လကျရှိ အလုပျပဲ ဆကျလုပျအုံးပေါ့။ နောကျအဆငျပွလောတော့မှ ဒီထကျ လူအငျအား ထပျတိုးကွတာပေါ့ဆိုပီး…. ကဲ မှနျးစမျး မွကေိုစမျးကွညျ့မယျ ပေါကျတူးယူခဲ့ ဆိုတော့… ရှာသားတှလေညျး တကျကွှလာတာပေါ့။
နောကျ မွကေို ပေါကျတူးနဲ့ ပေါကျလိုကျတာ တခြှမျးခြှမျး မွညျနတေော့တာပဲ။ (ဓာတျမွသွေဇာ တနျခိုးတှပွေပီး မွတှေေ ကြှတျကုနျတော့တာပါ)
ဒါဆိုသိပွီ ဆိုပွီး အဲ့ဒိအခြိနျကနေ စတငျလာခဲ့ လိုကျတာ… အခုဆိုရငျ ခနျြထပူရီမှာ စပါးအပွငျ အခွားနှဈရှညျပငျတှရေော၊ စားပငျသီး ပငျတှရေော စုံလို့။ ဒါ့အပွငျ အဲ့ဒိဒသေက တောငျသူလယျသ မားတှအေတှကျ စိုကျပြိုးရေးသငျတနျးကြော ငျးကွီးလညျး ဖှငျ့ပေးထားတယျ။
နောကျ အပငျတှကေထှကျတဲ့ သဘာဝ အရငျးအမွဈတှနေဲ့ လူ့အသုံးအဆော ငျတှေ စားသောကျကုနျတှေ စတာတှကေို စကျရုံတှနေဲ့ ထုတျနပွေီလေ…. သငျတနျးကြောငျး ဆရာကတော့ ကိုယျရေးအရာရှိကွီးပေါ့။
(နမူနာ တခုပွောရရငျ အဲ့ဒိဒသေက ပကျြစီးသှား တဲ့မွတှေကေို မွဆေီပွနျလုပျတာနဲ့ပ တျသတျလို့ ခနျြထပူရီမှာ မွကျရှညျရိုငျးတှကေ မပေါကျတော့
ကမ်ဘောဒီယားနဲ့ ဗီယကျနမျတှဆေီက ဝယျပီး သင်ျဘောတှနေဲ့ ကားတှနေဲ့သယျ။ နောကျမှ အဲ့ဒါတှကေို နုတျနုတျစငျး မွကွေီးပျေါမှာ ခငျးပွီး သဘာဝမွဆေီ ပွနျလုပျခဲ့ရတယျ)
ဒီ ဖွဈရပျလေးကို နမူနာယူပွီး ကနြျောတို့နိုငျငံရဲ့စိုကျပြိုးရေး ကဏ်ဍကိုလညျး တိုးတကျအောငျ တခတျေဆနျး ပွောငျးလဲ သငျ့ပွီလို့ ထငျမွငျမိပါကွောငျး တငျပွလိုကျရပါတယျ။
(မူရငျးက ထိုငျးနိုငျငံမှာ နခေဲ့ဖူးတဲ့ စာရေးဆ ရာမကွီးတယောကျ ဟောပွောပှဲကနေ စာသားအဖွဈ နားလညျနိုငျစရေနျ ပွနျလညျ edit လုပျထားရပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျဟာ ထိုငျးနိုငျငံမှာ တကယျဖွဈသှားခဲ့ တဲ့ အဖွဈကနေ ယနေ့ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ ကမ်ဘာကိုထိုးဖောကျနတေဲ့ စိုကျပြိုးရေး နညျးစနဈကို မီးမှောငျးထိုးပွခငျြ ရုံမြှသာ….)
← သတိ မထား မိကြတဲ့ “အိမ်နိ မိတ်” (၁၂) ချ က်
နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ဆောက်နည်းများ →